ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စမတ်ကျတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်လားဆိုတာ ဒီလိုအချက်တွေနဲ့တွက်ချက်ကြည့်လို့ရနိုင်… – Trend.com.mm
Posted on January 6, 2019 January 7, 2019 by Shun Lei Phyo
လူတိုင်း တစ်ဖက်သား အားကျရလောက်သော စမတ်ကျတဲ့ ဘ၀ပုံစံကို လိုချင်စမြဲပါပဲ…
အလွန် ရိုးရှင်းသော်လည်း အထောက်အကူဖြစ်လှသည့် အောက်ပါမေးခွန်း (၅)ခုအားနေ့စဉ် မိမိကိုယ်ကို မေး၍ ဆန်းစစ်ပါ ။
မိမိ ဘယ်သူလဲ ?
အတိတ်မှာ ဘာဖြစ်ခဲ့ တယ် ၊ ဘာတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ တယ် ၊ ဘယ်လို ခက်ခဲခဲ့ တယ် ဆိုတာနှင့်ပက်သက်ပြီး တွေးတောကာ အချိန်မဖြုန်းတီးပါနှင့် ။ မိမိ အတွက် ၂၄ နာရီ ၇ရက်လုံးလုံး ၃၆၅ ရက် စသဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် အကြောင်းအရာများစွာ ရှိနေပါသေးတယ် ။ မိမိမည်သူ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ လက်ရှိ မိမိရပ်တည်ချက် ခံယူချက်နှင့် လုပ်ဆောင်မှုပ်ါမှာပဲ မူတည်နေပါတယ် ။ မိမိ ခံစားချက်များ နှင့် တန်ဖိုးထားသော အရာများကို ချရေးပါ ။ ခံစားပါ ။ကောင်းသော အတိတ်ကို ယူဆောင်ပြီး မိမိကို နာကျင်စေသော အရာမှန်သမျှကို မေ့ဖျောက်ပါ ။ သည်းခံ ခွင့်လွတ်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ ။ မိမိ အမှားလုပ်မိသော အခါ မိမိအား စူးစိုက် ဝေဖန်မည့် အကြောင်းအရာများကို လက်ခံတတ်အောင် ပြင်ဆင်တတ်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ ။ မည်သည့်နေရာ ဖြစ်စေ ၊ မည်သို့ သောသူ ဖြစ်စေ မိမိရောက်ရှိနေသော နေရာသည်သာ မိမိတန်ဖိုးထားသင့်သော ၊ သင်ယူ ပြုပြင် နိုင်သော အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်တယ် ။ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားပါ ။ မိမိသည် မိမိ နေရာအတွက် အလွန်တန်ဖိုးရှိသူဖြစ်ကြောင်း မမေ့ပါနှင့် ။
မိမိ လုပ်ဆောင်မှုက ဘယ်လို ထင်ဟပ်မှု မျိုးလဲ ?
ပျော်ရွှင်နေပါသည်ဟု သင့်ကို ထင်ဟပ်စေသော အရာမှာ သင့်လုပ်ဆောင်မှု ၊ သင့်ပြောဆိုမှု တို့ ၏ စည်းချက်မှန်မှန် ဆောင်ရွက်နေမှုပင် ။ စည်းချက်မှန် နှင့် ကြည်လင် ငြိမ်းချမ်းသော ခံစားချက်များကို ဖျက်ဆီးနေသော အရာမှာ မိမိကိုယ်ကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကာ ညဉ်းဆဲ တတ်သောစိတ် ဖြစ်ပေးသည် ။ ထို့ကြောင့် မိမိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ၊ မိတ်ဆွေများ ၊ သူငယ်ချင်များ ၊ သားသမီး၊ မိဘ ၊မောင်နှမ စသော မိမိ နှင့် ဆက်နွယ်နေသော သူများကြားတွင် မိမိသည် ပျော်ရွင်ဖျက်လတ်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သော သူဖြစ်စေရန် ကြောက်စိတ် ၊ ချိတုံချတုံစိတ် နှင့် အမှားလုပ်မိတော့မည် ဟူသော စိုးရိမ်စိတ်များကို ဖယ်ရှားပြီး မိမိ၏ လက်ရှိ ဘ၀နှင့် လက်ရှိ ပျော်ရွှင်မှု ကို တည်ဆောက်သင့်သည် ။
ဘာကို ရွေးချယ် သင့်သလဲ
လူတစ်ဦး၏ နေ့ စဉ် ရပ်တည်ချက်သည် ရွေးချယ်မှုဖြင့် စတင်ရစမြဲပင် ။ မိုးလင်းကတည်းက ဘာဝတ်ရမလဲ ? ဘာစားရမလဲ ?သွားသင့်လား? မသွားသင့်ဘူးလား ? ပြောရမလား ? မပြောရဘူးလား ? စသဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ၊ ရွေးချယ်မှုပေါင်းများစွာ ဖြစ့် စတင်ရပါသည် ။ မိမိက ကတိက၀တ်ပြုထားသော အရာများကို ချိုးဖျက် ပစ်ခြင်းသည် မှားယွင်းသော ရွေးချယ်မှုပင် ။ သေးမွှားသော ကတိက၀တ်များအား ဘာမှ မဖြစ်လောက်ဘူး ဟု ခဏခဏ ချိုးဖောက်မိပါက ကြီးမားသော ကိစ္စများကို လည်း အလွယ်တကူပင် ချိုးဖောက်မိမှာ သေချာသည် ။ ခေတ်မှီ ရပါမည် ။ သို့သေည် ခေတ်နောက်လိုက်ကာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် ပစ္စည်းနောက် တကောက်ကောက် မပါစေနှင့် ။ ပစ္စည်း တစ်ခုခုကို ၀ယ်မည်ဆိုပါစို့ ၊ ထိုပစ္စည်းသည် “ ငါတကယ်လိုအပ်တာလား ၊ လိုချင်တာလား ? ” ဟူသော မေးခွန်းကို ကွဲပြားပါစေ ။ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ပါစေ ။
မိမိသည် အလိုက်သိသူလား ?
မိမိ လုပ်ငန်းရှင်သည် စီးပွားရေး အမြင် မရှိသူလား ၊ စည်းမျဉ်း ဥပဒေ မရှိသူလား ၊ ခေါင်းဆောင်မှု ညံ့ဖျင်းသူလား ? စသော စိတ်ခံစားချက် ကို မိမိ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် မရောထွေးပါစေနှင့် ။ မိမိ ထင်မြင်ချက်များနှင့် လိုက်၍၄င်းကောင်းအား မလေးမစားမလုပ်ပါနှင့် ။ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်နှင့် မရှုပ်ထွေးစေပဲ အလိုက်သိပါ ။ မလိုလားအပ်ပဲ လုပ်ငန်းထဲမှာ မပျော်ရွှင်ရအောင် မဖန်တီးပါနှင့် ။ ကျိုးကြောင်း ဆီလျော်အောင် တွေးတောနိုင်သူ ဖြစ်သင့်သည် ။ စိတ်ဖိစီးမှုများ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်လာပါက စကားစမြည်ပြောပါ ။ မျှဝေခံစားတတ်ပါစေ ။ သတိပြုရမည့် အချက်မှာ မျှဝေခြင်း ဆိုသည်တွင် ပရမ်းပတာ ဖရိုဖရဲ ဦးတည်ချက်မဲ့ သော အချိန်ဖြုန်းတီးစေသော ပြောဆိုခြင်းမျိုး ရှောင်ရှားသင့်သည် ။
မိမိ ရည်မှန်းချက် က ဘာလဲ ?
အောင်မြင်နေသော ၊ ပျော်ရွှင်နေသော သူငယ်ချင်း နှင့်အတူ ဘေးချင်းယှဉ်လျက် ထိုင်ရသော အခါ ၊ သားသမီးများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာ ကစားနေသော မိသားစုများကို မြင်သောအခါ မိမိလည်း တစ်နေ့ ဒီလို ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမည် ဟူသော ခံစားချက်ကို လူတိုင်း နားလည်နိုင်ပါသည် ။ “ ငါကရော ဘာလို့ မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ? ” ဆိုသော မေးခွန်းမှာ သင့်အား အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင် ရောက်အောင် တွန်းပို့နေသော အရာတစ်ခုပင် ။ မိမိ ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုသော မေးခွန်း၏ သော့ချက်မှာ မိမိသာ လျှင် အဓိက ကျကြောင်း နားလည်သင့်သည် ။ထို့အပြင် အပျင်းကြီးခြင်းသည် အောင်မြင်မှုနှင့် ဝေးကွာစေလိမ့်မည် ။ မိမိ၏ ဆန္ဒကို ကိုယ်စားပြု၍ အခြားသူမှ ဆောင်ရွက်ပေးလို့ မရနိုင် သော်လည်း အထောက်အပံ့ အကူအညီများ ရရှိရန် ကောင်းမွန်သော လူမှုဝန်းကျင်တစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါသည် ။